१६ नेपाली कम्पनीको उत्पादन र ४६ विदेशी कम्पनीबाट आयात हुने पारासिटामोलको अभाव किन? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
१६ नेपाली कम्पनीको उत्पादन र ४६ विदेशी कम्पनीबाट आयात हुने पारासिटामोलको अभाव किन? अभाव नै भएको छैन, तर पाउन केही कठीन छ: व्यवसायी
कमला गुरुङ बुधबार, जेठ २६, २०७८, १९:४९:००
काठमाडौं - ‘बजारमा अहिले पारासिटामोलको माग धेरै छ। व्यक्तिहरुले एकै पटक धेरै किनेर घर थुपार्छन्। अहिले एक जनालाई एक पत्ता भन्दा बढी दिन सकिएको छैन।’ यो भनाइ अनामनगरस्थित एक फार्मेसीमा कार्यरत फर्मासिस्टको हो।
औषधि व्यवसायीका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासँगै बजारमा पारासिटामोल किन्नेको संख्या बढेका कारण सहज रुपमा पाउन समस्या भइरहेको हो। 'एक त अस्पतालहरुमा विगतमा भन्दा धेरै खपत भइरहेको छ। अर्को तर्फ मानिसहरुले अनावश्यक रुपमा घरमा लगेर धेरै पारासिटामोल स्टक राखेका कारण पनि समस्या आएको हो,' नेपाली उत्पादक र व्यवसायीहरुको साझा भनाई यस्तो छ।
उनका अनुसार बजारमा पारासिटामोलको अभाव नै भइरहेको अवस्था भने छैन। तर केही स्थानमा सहज रुपमा पाउन समस्या भइरहेको भने उनी स्वीकार गर्छन।
कुनै पनि औषधिको मूल्य बढाउने यो सही समय नभएको उनले बताए।